I-China i-PP Bottle IV Isisombululo semveliso yabenzi kunye nabathengisi | IVEN
Umgca weMveliso yeSisombululo se-IV-Ibhotile yePlastiki ye-LVP
Umatshini wokuvelisa isisombululo se-PP ozenzekelayo uquka izixhobo ezisetiweyo ezi-3, umatshini wangaphambi kokufaka / umatshini wokufaka inaliti, Umatshini wokuvuthela ibhotile, Umatshini wokuhlamba-wokugcwalisa umatshini. Umgca wemveliso unempawu zokuzenzekelayo, ezomntu kunye nezikrelekrele ngokusebenza okuzinzileyo kunye nolondolozo olukhawulezayo nolula. Ukusebenza kwemveliso ephezulu kunye nexabiso eliphantsi lokuvelisa, kunye nemveliso ekumgangatho ophezulu nolukhetho olufanelekileyo kwisisombululo sebhotile se-IV.
Ukulungiselela / umatshini weHowder Injection
+ Umatshini wokuvuthela iibhotile
+ Ukuhlamba-Ukuzalisa-Ukutywina umatshini
Ingasetyenziswa kwi-50-5000ml engagxothwanga kwingxowa ethambileyo yesisombululo ngokubanzi, isisombululo esikhethekileyo, isisombululo se-dialysis, isondlo se-parenteral, i-antibiotics, ukunkcenkceshela kunye nesisombululo se-disinfectant njl.
Umatshini wokuvuthela ibhotile ye-PP
Ukulungiselela ukulayisha isitishi:
Uninzi lwee-preforms lubekwa kwi-hopper, emva koko inkqubo yokutyisa yangaphambi kokuba ijikeleze ihambisa izinto zangaphambi kokuhamba ngokuhambisa. Independent tyaba eqhekeza preform elawulwa isikere Screw preform ukulayishwa.
Ukucwangciswa okwahlukileyo, ukujikeleza, ukulinganisa izixhobo zokucwangcisa kwangaphambili:
Izinto zangaphambili zahlulwe ngomgama olinganayo kwaye zigqithiselwe kwidisk ejikelezayo ejikelezayo, emva koko ijikelezwe ngedigri eyi-180 kwaye yafudukela kolunye ulungelelwaniso olungaphambili olulungiselela idiski. Akukho kuvalwa kwangaphambili kwaye akukho kuphambuka kwindawo echanekileyo.
Uyilo kabini lwebhokisi yokukhanya yokufudumeza, ukusasaza okuhle kobushushu, ukutshintshwa ngokulula kunye nokugcinwa.
Ukulungisa kwangaphambili, ukuthatha kunye nokuhambisa iibhotile:
Uhlobo oluvulekileyo lokuhanjiswa kwe-servo eguqukayo, i-cam yokubamba iminwe ngaphandle kweeplastiki kunye nomgubo wokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Ukutywina okuzimeleyo kunye neendlela zokolula:
Yamkela uyilo lokutywina olwahlukileyo, olungaphazamisaniyo. Ukutywinwa okuhle ukuvuthela ibhotile, akukho kuvuza. Ukolula intonga kuqhutywa yinkqubo enye ye-servo.
Umngundo lokuvula kunye lokuvala indlela:
Xa ii-preforms zigqithiselwa kwisikhululo sokuvuthela iibhotile, inkqubo ye-servo iqhuba ukujija ingalo ukutyhala ihinji yokuvula nokuvala intshukumo ukufezekisa imisebenzi yamazwe amabini.
Iibhotile ezigqityiweyo zithathwa kwisikhululo sokuvuthela iibhotile. Iidrafter zendlela yokudibanisa ziyazithatha kwaye zihambise kumatshini wokuhlamba-wokugcwalisa itywina umatshini ukuze aqonde imveliso yoqhagamshelo oluzenzekelayo.
I-1.Servo drive kunye nozinzo ngexesha lokuhamba ngesantya esiphezulu, indawo ebekiweyo ichanekile, yomelele, kwaye iindleko zokugcina ziphantsi.
2.The cam nokubotshwa iminwe ngaphandle ezilahliweyo zeplastiki kunye nomgubo ukuqinisekisa umgangatho imveliso.
Umthamo wemveliso ephezulu ye-3: ukusuka kwi-4000-15000bottles ngeyure.
Ulwakhiwo oluhlanganisiweyo oluhlanganisiweyo, umgama ochanekileyo weziko, amakhonkco kunye nezinye izinto zangaphandle azinakungena kwikhonkco, ulondolozo olulula.
5.Ukutywinwa akuthethi ukuvuza komoya, ukuphucula ukusebenza kokuvuthuza, ukunciphisa ixesha lebhotile.
Item Umzekelo womatshini
CPS4 CPS6 CPS8 CI-PS10 CPS12
Imveliso amandla 500ml 4000BPH 6000BPH 8000BPH 10000BPH 12000BPH
Ukuphakama kwebhotile enkulu mm 240 230
Ukuphakama okuphezulu kwangaphambili (ngentamo) mm 120 95
Uxinzelelo lweomoya (m³ / min) 8-10bar 3 3 4.2 4.2 4.5
Amanzi apholileyo (m³ / h) 10 ° C (uxinzelelo: 3.5-4bar) 8HP 4 4 7.87 7.87 8-10
Amanzi apholisayo 25 ° C (uxinzelelo: 2.5-3bar) 6 10 8 8 8-10
Ubunzima T 7.5 11 13.5 14 15
Ubungakanani boomatshini (kunye nokulayisha kwangaphambili) (L × W × H) (MM) 6500 * 4300 * 3500 8892 * 4800 * 3400 9450 * 4337 * 3400 10730x4337x3400 12960 × 5477 × 3715
Umatshini wokuhlamba uphawu lwebhotile ye-PP
Isikhululo sokondla iibhotile
Yamkela ikhonkco ngokuthe ngqo phakathi kokuhambisa umkhondo kunye nevili yokudayela ngebhotile, ukubamba ibhotile yokuhambisa, kunye nomoya ococekileyo ocinezelweyo ukukhawulezisa ukuhanjiswa, akukho kukrwela.
Isikhululo sokuhlamba umoya sebhotile
Umgaqo wokucoca kunye nenkqubo yile: ukuguqula ibhotile; umbhobho wokutsala unyusa ikham ukugubungela umlomo webhotile; Umbhobho womoya we-ionic nawo unyuka uye kwibhotile ngekham; umoya oxineneyo uvuthelwa kumbhobho ovutayo ukucoca ibhotile kwibhotile;
Kwaye kwangaxeshanye wanya amasuntswana afakwe kukungena komoya kwibhotile.
Iibhotile zeplastiki ezigeziweyo zisiwe kwisikhululo sokugcwalisa ngobuqhetseba, ukugcwaliswa kwemilomo yeebhotile zokugcwalisa umlomo. Icandelo eliphezulu lokugcwalisa isikhululo lixhotyiswe ngoxinzelelo lwe-tanki yolungelelwaniso rhoqo. Xa ulwelo luzalisa itanki yokulinganisa kwaye lufikelela kwinqanaba lokumisela, ulwelo lokondla i-pneumatic diaphragm valve luvale.
Isikhululo sokutywina eshushu
Esi sikhululo sisetyenziselwa ukuqinisa ukutywina ibhotile yeplastiki emva kokugcwaliswa. Yamkela iipleyiti zokufudumeza kabini ukufudumeza iminqwazi kunye namazibuko eebhotile ngokwahlukeneyo, ukugqiba ukutywina kwe-weld-in-non-contact uhlobo olushushu olunyibilikayo. Ubushushu bokufudumeza kunye nexesha liyahlengahlengiswa.
Isikhululo sokuphuma kwebhotile
Iibhotile ezitywiniweyo zigqithiselwa kwingqokelela yokukhupha iibhotile ngesikhululo sokukhupha iibhotile, kwaye zingene kwinkqubo elandelayo.
1.Ngokuzaliswa ngokuchanekileyo; umoya ekubhobhozeni echanekileyo, uyakwazi ukulawula iqondo deformation yebhotile emva nzala.
Akukho bhotile ayizaliswanga, akukho bhotile ayifakwanga.
Ingakwazi ukufikelela kwi-15,000BPH, ngokuxhomekeke kwisicelo somthengi.
4.Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeminqwazi ezinokusetyenziswa kwibhotile yokugqibela: Ikepusi yeYuro etywiniweyo; Ikepusi yonkcenkceshelo etywiniweyo; Ikepusi yokujija; Ukumisa kunye neAluminiyam ikepusi.
5.Ine-GMP ehambelana nomsebenzi wokucoca nokucoca inzalo.
I-XGF (Q) / 30/24/24 XGF30 / 30/24/24 I-XGF (Q) / 36/30/36 I-XGF (Q) / 50/40/56
Imveliso amandla 100ml 7000BPH 7000BPH 9000BPH 14000BPH
Ubungakanani bebhotile esebenzayo ml 50/100/250/500/1000
Ukusetyenziswa komoya 0.5-0.7Mpa 3m3 / min 3m3 / min 3m3 / min 4-6m3 / min
Ukusetyenziswa kweWFI 0.2-0.25Mpa 1-1.5m3 / h
Ubunzima Machine T 6 6.5 7 9
Ubungakanani boomatshini mm 4.3 * 2.1 * 2.2 5.76 * 2.1 * 2.2 4.47 * 1.9 * 2.2 6.6 * 3.3 * 2.2
Ukutya umbane Imoto ephambili 4 4 4 4
Ukuthatha oscillator 0.5 0.5
Umoya we-ionic 0.25 * 6 0.25 * 5
Imoto yokuhambisa 0.37 * 2 0.37 * 2
Ipleyiti yokufudumeza 6 * 2 6 * 2
Iyakwazi ukuhlangabezana nokuveliswa kobukhulu obahlukeneyo (100-1000ml).
2.It isicelo zombini ibhotile esemgangathweni PP kunye Self-yawa ibhotile ethambileyo PP.
Faka isicelo kwiimo ezahlukeneyo zesikhongozeli: ngeenxa zonke, i-oval, irregular, njl.
Umthamo wemveliso ephezulu ye-4: ukusuka kwi-4000-15000bottles ngeyure.
5.Imveliso ekrwada yokuvelisa imveliso yebhotile enye ye-500 ml ye-PP ilingana ne-0%.
Egqithileyo Ampoule Ukuzalisa umgca wemveliso
Okulandelayo: Umatshini wokuvelisa ibha ethambileyo
Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina,